भूगोल परिवर्तनले उदास तिङलावासीको खुशी कहिल्य फिर्ला ? - आयो खबर
भूगोल परिवर्तनले उदास तिङलावासीको खुशी कहिल्य फिर्ला ?
२०७४ मंसिर २७ प्रकाशित ०७:२१
(तिङलाका स्थानीयका साथै जिल्लाका पत्रकार र स्थलगत भ्रमणका आधारमा काठमाण्डौंमा तयार पारिएको सामाग्री)
मंसिर २७, काठमाण्डौ ।
भखैरै सम्पन्न भएको निर्वाचन होस् या पहिलो चरणको । दुवै निर्वाचनले मुलुकको १६५ वटै स्थानमा जनप्रतिनीधि दिएको छ, ‘जनतालाई’ । हिमाल ,पहाड र तराईकाले आफना प्रतिनीधिको जीतमा खुशी मनाईरहँदा सोलुखुम्वु तिङ्लाको जनतालाई भने ‘न निर्वाचनले छोयो, ‘न निर्वाचित जनप्रतिनीधिले नै उनिहरुको अनुहारमा हाँसो छ’ । सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरी संगै जोडिएको तिङ्लाका स्थानीयलाई चुनावको उत्साहले नछोएर नै मंसिर बित्दै छ । सोलुखोलाको पानी एकतमासले बगिरहेको छ, अनि तिङलाका जनता आफनै किसीमले बसिरहेका छन् ।
बहुसंख्यक मानिसहरुको आम्दनीको श्रोत पशुपालन ,खेतीबारी र वैदेशीक रोजगार नै हो । गाउँमा मुश्कीलले युवा अनुहार देखिने तिङलामा ‘छ त केवल रोग’ , ‘छ त केवल भोक’, ‘अनि शोक’ ।
हो, यहाँका जनताहरुको एउटै निराशा र छट्पटी भनेकै वर्षौदेखिको आफनो भूगोललाई राज्य पुनरसंरचनाले निल्यो । घण्टौ लामो दूरीमा रहेको गाउँपालीकामा लगेर आफूहरुलाई मिसाउदा अप्ठेरोमा पा¥यो र त आजभोली दिनप्रतिदीन तिङलाली जनताको रोग,भोक र शोक वढाएको छ । त्यसैले त गाउँमा जोसुकै छिरेपनि बूढापाकाहरु, “लौन बाबु, हाम्रो त बिल्लीबाठ नै भयो” यस्तै–उस्तै भनिरहेका देखिन्छन् । त्यसो त उनिहरुको छट्पटी सुनेर नसुने झै गरेर बसेकाहरुले साँधेको मौनताको विरोध स्वरुप तिङलाका जनताले चुनावमा ‘न मतदान गरे’, ‘न गाउँघरमा कुनै चुनावी गतिवीधि नै गर्न दिए’। चुपचाप मौन बस्दै आए, ‘र त चुनाव र निर्वाचित जनप्रतिनीधिको खुशीमा तिङलाली जनताले खुशी मिसाउन सकिरहेका छैनन्’ ।
बस्तीमा, ‘कि हातले गन्न सकिने संख्याका घरहरु छन्’, ‘त कि केवल वुद्धवुद्धा र स–साना केटाकेटी र तिनका आमा ‘ । प्राय बुढ्यौली अनुहारमा रोगले सताउदै लगेको संकेतहरु स्पष्ट देखिन्छ । अनि सकि-नसकी यताउता गरिरहेका कैयौं अनुहार । गाउँमा सोलु हाईड्रोले आशा गर्न सकिने आधारहरु बनाउँदै लगेपनि जनतामा खुशीको छनक उतिसारो भेटिन्न । रोजगारको लागी थुप्रै युवाहरु परदेशमा रमाईरहँदा आफनो बूढयौली उमेरमा सरकारी कामकाज गर्न टाढा धाउन पर्ने वाध्यताले गाँजेको छ वुद्धवुद्धाहरुलाई । त्यसैले त आफनो भूगोललाई पायक पर्ने स्थानमा ल्याईदिने त्यस्तो मान्छे खोजीरहेका छन् उनिहरु, ‘जो साँच्चै ईश्वर सरह होस्’ ।
वर्षौसम्म सल्लाको दियालो र टुकीको उज्यालोमा नै कैयौं हिउँद र वर्षा विताएका तिङलालीहरुलाई देश नयाँ संरचनामा गईसकेपछि विकासका लहर आउँलान् , सुखका दिनहरु फिर्लान् भन्ने आशा थियो । तर सीमाङ्कनको विषयमा भने सोच्दै नसोचेको अवस्थाले वेचैन वनाएको छ । त्यसैले त गाँउका जानेबुझेका बुर्जुक अगुवाहरुको एउटै बोली छ , “के हामीले आशा गरेको खुशी फेरि फिर्ला ?”
अनि स्थानीयहरुको एउटै स्वर, “हामीलाई नजिकैको दूरीमा पर्ने नगरपालीकावाट हुत्याएर घण्टौं हिडेपछि पुगिने ठाउँमा पुराईयो । ”
त्यसैले त तिङलाली जनताले चुपचाप यस पटकको चुनावमा समेत आफनो उपस्थीति जनाएनन् , स्थानीय निर्वाचन झै । जिल्लाका १२५ वटै मतदानस्थलमा शान्तिपूर्ण रुपमा जिल्लाबासीले मतदान गरे र आफूलाई लागेको प्रतिनीधि चुने तर तिङलालीहरुको लागि राखिएका मतपेटिकाहरु खाली भए । उनिहरुको मनभित्रका असन्तोहरु पूरा होला या नहोला ? त्यो भने हेर्न नै बाकि छ ।
प्रकाशित | २०७४ मंसिर २७ प्रकाशित ०७:२१
गुरुङ समुदायको नयाँ वर्ष ‘तमु ल्होसार’